Izindaba - Bamba iqhaza embukisweni okhokhelwayo we-EPS
Eminyakeni edlule, siye iqhaza professional EPS umshini imibukiso eJordani, eVietnam, eNdiya, eMexico naseTurkey njll Amazwe. Sisebenzise ithuba lombukiso, sihlangane namakhasimende amaningi asevele athenge imishini ye-EPS kithi yize engakaze ahlangane, futhi sihlangane nabangane abasha abaningi abanohlelo lokwakha izitshalo ezintsha ze-EPS. Ngokuxhumana ubuso nobuso, singaqonda kangcono imfuneko yabo, ukuze senze isixazululo esifanele bona.
Phakathi kokuvakashelwa izimboni ezahlukahlukene zamakhasimende, okwangihlaba umxhwele kakhulu kwakuyimboni eyodwa ye-EPS eNdiya nefektri eyodwa ye-EPS eTurkey. Imboni ye-EPS eseNdiya iyimboni endala. Bathenga amasethi angama-40-50 amasikhunta e-EPS kithi minyaka yonke ukwenza imikhiqizo ehlukahlukene yokupakisha. Ngaphandle kwalokho, bathenga nemishini emisha ye-EPS nezingxenye zokungcebeleka ze-EPS kithi. Besibambisene iminyaka engaphezu kwengu-10 futhi sakhe ubungani obujulile kakhulu. Bayasethemba kakhulu. Lapho bedinga eminye imikhiqizo evela eChina, bahlala besicela ukuthi sibasungulele yona. Esinye isitshalo saseTurkey singesinye sezitshalo ezindala kunazo zonke ze-EPS eTurkey. Bathenga amayunithi ayi-13 e-EPS Shape Molding Machines, i-1 EPS Batch Preexpander kanye ne-1 EPS Block Molding Machine kithi. Zikhiqiza kakhulu imihlobiso ye-EPS, kufaka phakathi ama-EPS cornices, ukufakwa kwe-EPS nemigqa yokuhlobisa ye-EPS enezingubo zangaphandle. Ama-EPS cornices anemiklamo ehlukene asetshenziselwa ulayini wangaphakathi wendlu yolayini, amabhodi ophahla we-EPS asetshenziselwa ngqo uphahla lwangaphakathi lwendlu. Lezi zinto zokuhlobisa zigcwele ngokulandelana futhi zithunyelwa njalo emazweni aseYurophu nase Middle-East. Eminye imikhiqizo ibuye ihlanganiswe ngocezu olulodwa noma izingcezu ezimbalwa ndawonye ukuze kuthengiswe kabusha. Kuluhambo oluhle impela futhi sijabule kakhulu ukuthi sibambisene nezinkampani ezinkulu kangaka.
Ngo-2020, ngenxa yegciwane leCorona, kufanele sikhansele imibukiso ehlukahlukene engaxhunyiwe ku-inthanethi futhi sishintshele ekuxhumaneni nge-inthanethi. I-WHATSAPP, WECHAT, FACEBOOK isivumela ukuthi sikwazi ukuxhumana kalula namakhasimende nganoma yisiphi isikhathi. Yize amaklayenti engakwazi ukuya eChina ukuzovakasha kithi, singahlala senza amakholi wevidiyo noma wevidiyo ukukhombisa ifektri nemikhiqizo yethu lapho kunesidingo. Inkonzo yethu enhle ihlala ikhona. Vele, sethemba ngobuqotho ukuthi iCORONA izoma kungekudala, ngakho-ke abantu emhlabeni wonke bangahamba ngokukhululeka nomnotho ungafudumala.
I-China Fair Jordan 2013
Umbukiso we-17 # Vietnam International Plastic & Rubber Industry Exhibition
2018 India Isentha
I-China Homelife & Machinex Mexico 2018
I-China (Turkey) Trade Fair 2019 E-Istanbul Expo Isikhungo